राम शरण महत र सुशील कोइराला लाई एक ठाउँ मा राखदिने हो भने उनीहरूले एक पछि अर्को गल्ती गर्दै जान्छन् -- जस्तो कि अहिले गरेका छन। चीनले मलाई पेल्यो, गुहार गुहार भन्दै मोदी को मा जापान आउने जमाना मा राम शरणले दिल्ली होइन टोक्यो मा सम्मेलन गर्ने भन्दै छ। यी बाहुन हरुको racism को ओर अन्त छैन। मोदी ले जे गर्न सक्छ त्यो जापानले गर्न सक्दैन।
भ्रष्टाचार गल्ती हो भने राम शरण ले समाचारपत्र हरु छताछुल्ल पारेको छ। तर भ्रष्टाचार गल्ती होइन, भ्रष्टाचार त संस्कार हो। अर्को गल्ती बामे को भाइ रामे ले गर्दैछ --- अर्को दुई वटा गल्ती। के भने (१) विदेशी सहयोग सकेसम्म Foreign Aid को रुपमा माग्ने अनि (२) एक एक गर्दै जे जे भत्किएको छ त्यो बनाउँदै जाने। He wants to go back to the same old, same old. Whereas this earthquake should be seen as an opportunity to giveanew departure to the country.
तर उसको फोर्मुला नबुझ्नेले नबुझला, मैले त बुझ्छु: small budget, small corruption, big budget, big corruption. त्यहाँ कुनै कन्फ्यूजन छैन।
मैले propose गरेको
देशलाई नया दिशा
Big Infrastructure का लागि Foreign Aid
सानो संरचना हरु का लागि Foreign Direct Investment (FDI)
नेपाल सरकारले आफुले केही मैनेज गर्नै परेन। त्यसले भ्रष्टाचार को संभावना न्युन बनाउँछ अनि पैसा पनि बढ़ी आउँछ। नत्र भने नेपालको जुन इमेज छ जुन सारा दुनिया लाई थाहा छ, त्यो इमेज मेकओवर अहिले भइ हाल्ने भन्ने हुँदैन ----- especially when the actors are the same.
Every big crisis is an opportunity भनिन्छ ------- नेपालमा त्यो lost opportunity बन्ने क्रममा छ।
NRI rupee accounts not to be treated as FDI: Govt scheme is likely to damp squib
Top 10 Countries Corporations Want To Invest In Now
FDI can boost poorest economies, says UNCTAD
Govt bats for FDI in ecomm, to clarify definition of retail
Ukraine's foreign investment collapse: Failures and opportunities
The Truth About U.S. Capital Investment in the 21st Century
FDI dips 40 % in March
Lesotho: Private sector is essential for investment climate reforms-Minister
Ghana in top 10 FDI destinations in Africa and Middle East for 2014
2015 nepal earthquake Africa Foreign Direct Investment India Nepal ram sharan mahat relief and reconstruction Sushil Koirala